MCPA Certified Network Exam 2016 June
Submitted by zwintun on Mon, 06/20/2016 - 14:11
MCPA Certified Network Exam ကို ၁၉-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းမှ ဖြေဆိုသူ - (၄၅) ဦး မန္တလေးတိုင်းမှ ဖြေဆိုသူ- (၂) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။
Read more about MCPA Certified Network Exam 2016 June
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၇) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 06/20/2016 - 14:00
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Networking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Wireless Network Essentials Course (WNE) အမှတ်စဉ် (၁၇) သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည််ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ Company များ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network Engineer များ၊ IT Officer များ၊ Wireless ISP လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ Wireless အကြောင်းလေ့လာနေသူများ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။ သင်တန်း၌ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်ဦးဇော်ဝင်းထွန်း မှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများ…  Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration  Cisco Wireless Controller and APs  Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)  Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )  Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE  VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi  Mikrotik Cloud Core Router Management  Wireless IP Camera Configuration  Pfsense Hotspot  Firewall VPN Network  Storage Management (Synology)  VOIP Gateway and IP Soft Phones… အစရှိသည်တို့ကိုစာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားလေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ (၄) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ မှ ၃း၃၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်) MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀၀ (ခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)ျ သင်တန်းသားဦးရေ - (၁၅) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about “Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၇) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
"Windows Server 2012 Installation and Replication" သင်တန်းရက် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 06/20/2016 - 13:59
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ ကြီးမှုး၍ System & Data Replication နည်းပညာရပ် များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီလူငယ်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသော အိုင်တီပညာရှင်များ၊ MCPA Member များအတွက် Windows Server 2012 Installation and Replication သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက် မှ (၃) ရက် နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် Compu Tech Co.,Ltd. တို့ ပူးပေါင်းပြီး နည်းပညာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေအရ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနများ ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များနှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသူများ၊ Microsoft Certificated Professional တယောက် အနေဖြင့် ရပ်တည်လိုများ တက်ရောက်သင်ကြားသင့်သော နည်းပညာအထောက်အကူပြု သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို Real Server များပေါ်တွင် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သင်ကြားပြီး တွဲဘက်လိုအပ်သော RAID Controller Installation and Utility Setup from Management CD/Life Cycle နှင့် အခြား Add on Feacture များကိုလည်း ဆရာ ဦးရဲကျော်သိန်း (Compu Tech Co,.Ltd) မှ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးသွားပါမည်။ Content Overview – “Windows Server 2012 Installation and Replication” 1. Introduction the Windows Server 2012 and Active Directory Model 2. About Replication Services and Concept for any Platform 3. About Branded Server Management CD and Life Cycle Configuration 4. About Hardware and Software RAID System (RAID 0,1,5,6,10 and Hot Spare) 5. Step by step guide for Setting upaWindows Servers 2012 Installation with Hardware RAID 6. Step by Step guide for Active Directory Domain Services (ADDS) installation (DNS, DHCP, WINS, File and Print Services) 7. Step by step guide for Active Directory Replicate Installation on Different Server/Brand 8. Step by step guide for Distributed file System (DFS) Installation on Primary Server 9. Printer deployment via Windows Server 2012 group policy 10. Organization Level User Permission and Security သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက် မှ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉းဝ၀ နာရီ မှ ညနေ ၅းဝ၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၂၀၀,၀၀၀ိ/ (နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ) MCPA Member (20%) - ၁၆၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျပ်တိတိ) သင်တန်းသားဦးရေ - (၂၀) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၁၄)၊ (၃) လွှာ ၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက် ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃ဝဝသို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Read more about "Windows Server 2012 Installation and Replication" သင်တန်းရက် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 06/20/2016 - 13:58
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ IT နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Linux Fundamental to Professionals သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည််ဖြစ်သည်။ သင်တန်းအား အခြေခံမှစတင်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် Linux အခြေခံ သိထားသူများနှင့် အခြေခံမရှိသူများပါ တက်ရောက်နိုုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network Engineer များ၊ IT Officer များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ပြည်ပကုမ္ပဏီများတွင် Network Administrator အဖြစ်အလုပ်လုပ်လိုသူများ၊ IT ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် Linux Platform အား Basic မှ စတင်ပြီး Professional တစ်ယောက်ဖြစ်သည်အထိ သင်ကြားလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုုံုးပါက Linux Administrator တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုုင်မည် ဖြစ်ပြီး Linux Server ပိုုင်းအား ကျွမ်းကျင်ပိုုင်နိုုင်စွာ ကိုုင်တွယ်နိုုင်မည်ဖြစ်သည်။ Linux Command Lines များအား ပုုိင်နိုုင်စွာ အသုုံးပြုနိုုင်ပြီး Script များအား ကိုု်ယ်တိုုင်ရေးသားနိုုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးနိုုင်မည်ဖြစ်သည်။ Linux System ပိုင်းသာမက Programming အခြေခံနှင့် MySQL Database တို့ပါ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် CentOS နှင့် Kali Linux ကို အခြေခံပြီး သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများ…….. • Linux System Architecture • Linux Installation and Package Management • GNU and Unix Commands • Devices, Linux File systems, File system Hierarchy Standard • Shells, Scripting and Data Management • Interfaces and Desktops • Administrative Tasks, MySQL Basic • Essential System Services • Networking Fundamentals • Server Installation (Web, Mail, DNS, DHCP, Samba, Print, Failover, Load balancing) • Security (Snort, Suricata)…..အစရှိသည်တို့ကိုစာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားလေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးဆုံးပါက နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု CompTIA Linux +, LPI, Novel Linux Exam များကို ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ (၂၅) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉းဝ၀ နာရီ မှ ၁၁းဝ၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၃၀၀,၀၀၀ိ/ (သုံးသိန်းကျပ်) MCPA Member (50%) - ၁၅၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်) သင်တန်းသားဦးရေ - (၁၅) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၁၄)၊ (၃) လွှာ၊ MCPA LAB ROOM (2), MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about “Linux Fundamental to Professionals” အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှုး၍ Hardware (A+) and System Troubleshooting နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီလူငယ်များ၊ Hardware အား အခြေခံကျကျ သိရှိလိုသော လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် Technician များ၊ MCPA Member များအတွက် သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့မှစ၍ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ IT Environment တွင် ကျွမ်းကျင်သော Hardware Engineer များ ပေါ်ထွက်လာရေးနှင့် System ပိုင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော IT Technician များ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသင်တန်းအား အခြေခံကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်သူများနှင့် Hardware ပိုင်းကို အခြေခံပိုင်နိုင်လိုသူများ တက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် Hardware ပိုင်းကို အခြေခံကျနစွာ ကျွမ်းကျင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Hardware Engineer တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Content Overview – “ံHardware (A+) and System Troubleshooting” • Introduction to Computer System • Essential Hardware Components • Operating System Technologies • Installation and Configuration Microsoft Windows OS • Device Drivers & Third party application • System Maintenance • System Tweaking with Group Policy • Mastering System with Registry • Command Line Usage • Data Recovery • Linux OS Installation • Linux application package management • System Security • Fundamental Reverse Engineering • Workgroup Level Setup • Troubleshooting • Bonus အနေဖြင့် Keylogger (Hardware) & Wi-Fi Hacking သင်တန်းကာလ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက် မှ စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၀၉းဝ၀ နာရီ မှ ၁၁းဝ၀ နာရီအထိ သင်တန်းကြေး - ၂၀၀,၀၀၀ိ/ ( နှစ်သိန်းကျပ်တိတိ) MCPA Member (50%) - ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းကျပ်တိတိ) သင်တန်းသားဦးရေ - (၂၀) ဦး သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၈) ရက် ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃ဝဝသို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ အတန်းတက်ချိန်ရ၅ % မပြည့်ပါကသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။)
Read more about "Hardware (A+) and System Troubleshooting" သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Thu, 06/09/2016 - 11:58
Read more about ITPEC Exam Certificate ပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Thu, 06/09/2016 - 11:56
Information Technology Promotion Agency (IPA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် Questions Formulation Meeting (QFM) 2016 ကို မန္တလေးတိုင်း၊ ဟိုတယ်ရွှေပြည်သာတွင် ၁-၆-၂၀၁၆ မှ ၃-၆-၂၀၁၆ အထိ (၃) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Read more about ITPEC Exam Questions Formulation Meeting held on MDY
Submitted by zwintun on Sun, 05/15/2016 - 16:54
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြု Network စာမေးပွဲကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် တို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ စာမေးပွဲများမှာ အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသောကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များအတွက် အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသောစာမေးပွဲများဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲသည် Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောအသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဦးတည်စစ်ဆေးသောစာမေးပွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် ပညာရှင်နယ်ပယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ • စာမေးပွဲအမျိုးအစား - Network Associate Examination (NA) • စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ - ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) • စာမေးပွဲပြုလုပ်မည့်အချိန် - နံနက် (၉းဝဝ) နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂းဝဝ) နာရီအထိ • နောက်ဆုံးစာရင်းပေးရမည့်နေ့ - ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက် (ကြာသပတေနေ့) • စာမေးပွဲကြေး - NA Exam Fee - ၂၀၀၀၀ ကျပ် (MCPA အသင်းဝင်များအား ၅ဝ% Discount ရရှိပါမည်။) • ကျင်းပမည့်နေရာ - Room 203, MICT Park, လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ရန်ကုန်။ * * * * * * * MCPA Certified Network Associate (NA) Exam Preparation ( Intensive Course ) သင်တန်းဖွင့််လှစ်မည် သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက် - ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၊ ၄၊ ၅) ရက်နေ့ထိ (သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ) သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၉းဝဝ မှ ညနေ ၄းဝဝ သင်တန်းကြေး - (၂၀,၀၀၀) ကျပ် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်စာရင်းပေးသွင်းသူများသာတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ - အဆောင် (၁၄)၊ Kanaung Hub, MICT Park ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ဖုန်းနံပါတ် − ၆၅၂၂၇၆/၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု Networking စာမေးပွဲကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Tue, 04/26/2016 - 15:40
Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၈) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam စာမေးပွဲကို ၂၄−၄-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တွင် (၁၆၀ ) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် (၇၇) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။
Read more about Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပ
Submitted by zwintun on Sun, 04/17/2016 - 07:52
မင်္ဂလာရှိသော ဒီမြန်မာနှစ်သစ်ကူး 2016 မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ဥက္ကဋ္ဌ နှင်. တကွ အလုပ်အမူဆောင်များ၊ အသင်းဝင် အသင်းသား များမှစပြီး မြန်မာသူ မြန်မာသား အားလုံး၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး၊ ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းဝေးကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ ကောင်းကျိူးလိုအင်ဆန္ဒလေးများ ပြည့်ဝကြပါစေ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအောင်မြင် တိုးတက်ပါစေလို. ဆုတောင်း နုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။ zawwintun
Read more about မြန်မာ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်း ၂၀၁၆